Tamarta Ku-Saleysan Waxyaabaha aad raadineysid marka aad iibsanayso Biomass Boiler. Wax dheeri ah baro
Home > tamarta la cusboonaysiin karo > Biyo-kuleyliyaha
Noocyada qulqul-dabka (biomass) waxay sida caadiga ah ku gubaan pelletada qoryaha oo lagu soo geliyo bacaha albaabka. Xilliga kuleylka ah ee ay soo saaraan waxaa markaa loo qaybiyaa qolalka dabka ah ee gurigaaga si ay u siiyaan kuleyl iyo kulul.
Ku rakibida a warshad biyomass ah ma yareyn doonto oo keliya yareynta biilasha shidaalka laakiin waad heli doontaa Dhiirrigelinta kuleylka ee dib loo cusboonaysiin karo (RHI) taas oo loogu talagalay nidaamyada dabiiciga ah ee gudaha lagu bixin doono sanadaha 7. Beddelida nidaamka kuleylka qubeyska hore wuxuu kaa badbaadin karaa £ 880 sanadkii (Source: Energy Savings Trust).
Noocyada Kuleyleyaasha Biyomaasiga ah
Doorashada ugu caansan, kuwan waxay gubaan kalluunka yar yar ee la soo saaray. Waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso wakhtiyada 2-3 usbuucii oo mar qashin ka dhig toddobaadkii hal mar. Ama waxaad dooran kartaa dukaanka boodhka oo ballaadhan oo ay ku jiraan boodhadhka aad u bixiso lorry.
Guryaha waaweyn ee yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, daboolka kuleylka qoryaha ayaa ku siin kara kuleylka iyo biyaha kulul ee leh faa'iidada dheeraadka ah ee muraayadda muraayadda ah ee la siinayo diirimaad toos ah. Kuwani waxay kuleyliyaan kuleyliyaha waxayna badanaa isticmaalaan shimbiraha hadda jira ama dabka lagu rakibay.
Chip Wood iyo Boorsada "Wood Log"
Kuwani waxay u baahan yihiin waxoogaa faragelin ah marka la barbar dhigo qoryaha "pellet pellet" sababta oo ah waxay ubaahan yihiin quudin iyo daaweyn badan oo cad. Wanaagsan haddaad haysatid qalabka shidaalka ee shidaalka ah.
Sidee loo heli karaa Biomass oo leh Tamarta Tamarta?
Kala hadal annaga. La-taliyeyaashayada ayaa kaa caawin doona wixii su'aalo ah ee aad ka qabtid biomass iyo habka rakibidda.
3. Samee taariikhda rakibidda
Aan ku caawino
Maxay dooranaysaa Tamarta Qalabka dabiiciga ah ee biomasskaaga?
Waxaan ku siin karnaa doorasho ballaadhan oo ah doorashooyinka kululeeyaha dabiiciga ah - kala duwanaanta qoryaha qoryaha ayaa ka dhigi kara waxyaabo dheeraad ah ee jikadaada!
Kooxdayadu waa khabiiro ku rakiban qalabka bayoolajiga waxayna ka jawaabi doonaan dhammaan su'aalahaaga.